Posts of sanaymin friends
Posted on 2/8/2015 by shweyoat
ကျမသူ့ကိုအဖြေပြီးတာတစ်လကျော်ကြာပြီ။ သူ့ကိုကျမအွန်လိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ပြီး အပြင်မှာ လေ့လာခဲ့သည်။ သူသည် ကျမအထင်ကြီးသော ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သူဘာပြောပြောသဘောကျသော ကြောင့် ကျမအွန်လိုင်းသုံးရင်း သူအွန်လိုင်းတက်လာပြီဆို မည်သူနှင့်မျှ စကားမပြောတော့ဘဲ သူ့တစ်ယောက်တည်းနှင့်သာ အချိန်ကုန်စေမိသည်။ သူ့ဆီမှ ဗဟုသုတရသည့်စကားများနှင့် ၊ ဟာသများသာ ကြားရသည်။ ထို့ကြောင့် လူတွေ ခပ်များများထဲမှာ သူ့အားကျမရွေးချယ်မိသည်။ (မှတ်ချက်- သူ့တွင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုးပန်းနည်းပေါင်းစုံရှိသည်။ ကျမပို့စ်ကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူများမှတ်သားကြပါ ကုန်)ကျမအွန်လိုင်းတွင် လူအတော်များများကို ကိုကိုဟုခေါ်ကာ စကားပြောလေ့ရှိသည်။ ကျမစိတ်ထင် ငါးယောက်နည်းပါးရှိမည်။ ထိုသူများသည် ကျမနှင့်သိပ်ခင်သူများဖြစ်သည်။ (အမှန်တကယ်ပြောရလျှင် ချက်ဘောက်မှာချက်ရင်း အခေါ်အဝေါ်မမှားတော့၊) သို့သော် အပြင်မှာတော့ ကျမသွားမတွေ့ဖြစ် သူ့တစ်ယောက်ကိုတော့ ဖူးစာရေးနတ်က အွန်လိုင်းမှ မြှားပစ်လိုက်သည်ထင်၏။
ကျမကိုသူ ညီမလေးလို့ တစ်ခါတစ်ရံမှခေါ်ကာ၊ ညည်းညည်းနှင့်သုံး၍ ရင်းနှီးမှုကို အလွယ်တကူရယူသည်။ အမြဲတန်းလိုလို ပေတူး၊ ညစ်ပတ်အိုးကွဲ၊ ကြောင်းချီး နာမည်စုံလှသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု ကျမထိုနာမည်များကိုလဲ နှစ်သက်မိသည်။( သူခေါ်လျှင်ပြောသည်။ အခြားလူခေါ်လျှင် အင်တာနေရှင်နယ် အဆဲပေါင်းစုံကျမ်းထဲမှ စာမျက်နှာ အစအဆုံး ဆဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပံ့လိုသည်) သူနှင့်ကျမ နှစ်ပတ်တစ်ခါ တစ်ပတ်တစ်ခါ အပြင်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် ဆုံကြသည်။ သမီးရည်းစားလို့ မည်သို့မှ မထင်နိုင်သော စုံတွဲပုံစံမျိုးဖြင့် နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာရေး၊ညာရေးတို့အား လက်သီးလက်မောင်းတန်းဆွေးနွေး ကြသည်။ ကျမတို့ ထိုင်စကားပြောပြီဆိုလျှင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှ ဆိုင်ရှင်ကစကာ စားပွဲထိုးများအထိ ကျမတို့နားတစ်ဝဲလည်လည်နှင့် ကျမတို့၏ တောင်စဉ်ရေမရ စကားများကို ပေါ်တင်တစ်မျိုး၊ ထိုင်ခုံဖုန်သုတ်တစ်ဖုံ၊ ရေနွေးထည့်တစ်ခါ နည်းမျိုးစုံနှင့်နားထောင်ကြသေးသည်။ ထိုနေ့က သူနှင့်ကျမ စကားပြောတာ ထိုလက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် သုံးနာရီနီးပါးကြာသွား၏ ။ ရေနွေးငါးအိုးနီးပါးကုန်ကာ ကျမအိမ်သာနှစ်ခါသွားရသည်။ အပြန်တွင် သူကလိုက်ပို့ပြီး
“ ကြောင်းချီးရုပ်ရေ ညည်းကိုညကျငါဖုန်းဆက်လိုက်မယ်”
ညရောက်သည့်အခါ ကျမအိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ အလုပ်ရှုပ်တော့သည်။အဖေ့စားပွဲပေါ်ကို ဖုန်သုတ်( သန့်နေရဲ့သားနှင့်) အဖေစာမရေးအောင်စကားရှာကြံပြော (အဖေစာရေးလျှင် အဖေ့စားပွဲပေါ်ရှိ ဖုန်းမြည်လာလျှင် ကျမစကားပြောမလွတ်လပ်မည်စိုးရိမ်သောကြောင့်ပင်။ ထိုအချိန်က ခုလိုလက်ကိုင်ဖုန်းတွေ ခေတ်မမီသေး(အဲလေ) ထိုဖုန်းကလဲ လက်မကိုင်ဘဲ ခြေနှင့်ကိုင်တာကျလို့ ကျမပြောချင်သည်က ကြိုးဖုန်း၊ ထိုဖုန်းသာ ကျမတို့၏အိမ်တွင်ရှိ၏ ) ကျမတစ်ယောက်တည်း အဖေနှင့်အမေ ကြားတွင် ခြေချင်းရှုပ်နေသောကြောင့်
“ဟဲ့ ရွှေရုပ် ညည်းအဖေစားပွဲမှာ ခဏလေး နာရီဝက်လောက် ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်စမ်း၊ ထိုင်နိုင်ရင် ညည်းကို မနက်ဖြန် ညည်းစားချင်တဲ့ နန်းကြီးသုပ်လုပ်ကျွေးမယ်… တီဗွီကြည့်ရတာ အာရုံပျက်တယ် လျှပ်စီးကိုလက်နေတာဘဲ”
“အယ်… ပျော်လိုက်တာ …အဟိဟိ…”
ကျမ အဖေ့စားပွဲမှာ ထိုင်လိုက်ချိန်တွင်
“ဟဲလို” (ကျမအသံကိုအစွမ်းကုန် နှုံးညံ့ပစ်လိုက်သည်။ ကြာသံနှင့်ထူးလိုက်သောအခါ)
“ဒကာကြီး နဲ့ပြောချင်လို့ပါ ”
အဖေသည်ဘုန်းကြီးနှင့်အကြာကြီး လေပစ်သည်။ အဖေကိုစကားအတိုချုန်းလိုက်တာ နာရီဝက်နီးပါးကြာ သည်။ အဖေဖုန်းပြောနေချိန် သူဖုန်းခေါ်လို့မရမှာကြောက်မိသည်။ အဖေ့ကိုမပြောရဲသောကြောင့် အဖေဖုန်းဆက်တာကြည့်လိုက် ခေါင်းကုတ်လိုက် ၊သက်ပြင်းချလိုက်နှင့် ချာလပတ်လည်နေတော့သည်။ နောက်ဆုံးမအောင့်နိုင်သည့်အဆုံးမှ ဟိုသီချင်းအား အော်ဆိုလိုက်မိသည်။
“ရင်မှာခံစား …..သူမမြင်နိုင်ပေ….. အသည်းထဲက အတွင်းကြေ….. အသည်းထဲက …အိုဝို… ၀ိုအို့အို့အို… အသည်းထဲက အတွင်းကြေ”
အဖေကျမကို မျက်ခုံးကျုံ့ပြီး ဖုန်းချလိုက်သည်။
“တင်ပါ့ဘုရား…အဲလေ ရွှေရုပ်လား…. သြော်အေး ရှိတယ်”
အဖေမခေါ်ခင် ရင်တုန်ပန်းတုန်(အဲလေ ရင်ဘဲတုန်တာ ပန်းမရှိဘူး အဟိ) နှင့် ဖုန်းလုကိုင်ပြီးသားဖြစ်နေ၏။
အဖေကမျက်စောင်းထိုးပြီး အမေ့နား ကျမကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းနှင့်နှစ်ပေခွဲလောက်သာကွာသည့်နေရာတွင် ထိုင်ကာ တီဗွီ(ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ) ကြည့်နေ၏။ကျမအသံကိုတိုးကာ
“အေးပေတူးမ ငါညည်းကိုခေါ်နေတာ နာရီဝက်နီးပါးရှိနေပြီဟဲ့”
“ဟင် … အဲ့ဒါအဖေလေ…”
“ဘာမှမဟုတ်ဘူး” ပြောလိုက်တော့ ဖုန်းထဲမှ
“အဖေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဖေဟုတ်တယ်… အဖေဘုန်းကြီးနဲ့ဆက်နေတာ..အကြာကြီးဘဲ”
“အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူး… နင်နဲ့ငါနဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပြောင်းမယ်…အဲ့ဒါနင်စဉ်းစားစမ်း ငါ့ကို ကိုကိုလို့မခေါ်နဲ့ ကျန်တာခေါ် ”
ကျမစဉ်းစားသည်။ ချက်ချင်းခေါ်ချင်သော ဝေါဟာရလေးတစ်ခုထွက်လာသည်။ သို့သော် ကြောက်၏ ။ မခေါ်ရဲ ရှက်၏။
“သိဘူး … ခင်ဗျားဘဲပြောတော့ ..” (ဘေးတွင်အဖေရှိနေသောကြောင့် ခင်ဗျားနှင့်ပြောသည်)
သူက တစ်ချက်ရယ်လိုက်ပြီး ၊
“ညည်းကိုငါက ချစ်လို့ခေါ်မယ်….. သိလားကြောင်းချီးရုပ်”
“ငင့် ရှင်းလိုက်တာ ချစ်လို့ခေါ်မယ် ကြောင်ချီးရုပ်တဲ့” (စိတ်ထဲမှကြိတ်ပြောသည် အပြင်မှာတော့)
“ညည်းကတော့ ငါ့ကို ဟိုလေ… မောင်လို့ခေါ်”
ကျမပျော်သွားသည်။ ကျမသူ့ကိုခေါ်ချင်သည့်ဝေါဟာရ။ သို့သော် သူကဆက်ပြောသောကြောင့်ကျမ အကြပ်ရိုက်သွားသည်။
သေစမ်း။ အဖေရှေ့တွင် သူစိမ်းယောင်္ကျားလေးကို မည်သို့မည်ပုံ မောင်ဟုခေါ်ရမည်နည်း အဖေက ရှေ့တွင် တီဗွီသာကြည့်နေတာ နားနှစ်ဘက်က နောက်ရောက်နေသည်။ ခေါ်လို့မရဘူး အဖေရှိနေသည်ဟု မည်သို့ပြောရမည်နည်းထို့ကြောင့်
ကျမ အသံကိုနှာခေါင်းထဲမှထုတ်ကာ မပီမသဖြင့် (လိုက်ခေါ်ကြည့်ကြပါကုန်)
“ဟင်…. ဘယ်လို …ပြန်ခေါ်ပါဦး…”
“ ဟာ ..ဘာတုန်းဟာ…”
သူနဲ့ကျမ ဝေါင်ကိုပတ်လည်ရိုက်ကာ ဖုန်းချလိုက်ကြသည်။ အဖေ့ကြည့်တော့ ပြုံးစိစိနှင့်အမေ့ကြည့် တော့လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါဘဲ၊ ကျမအရှက်ကြီးရှက်၍ ကျမအိပ်ခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်ကိုပြေးတက်တော့ ခလုတ်ကာ လဲတော့သည်။ ခလုတ်တိုက်လို့ယောင်သည့်အခါမှ ပီပီသသကြီးဖြင့်
“အောင်မလေး …. မောင်တော့ကျိုးပြီ”
Posted on 4/9/2014 by shweyoat
ပြောတဲ့သူက ကေဇင်ပုံး .(နာမည်ရင်း ကေဇင်မိုးဖြစ်သော်လည်း ကွန်ပြူတာသင်ကတည်းက ကေဇင်ပုံးကိုမသိသောကြောင့် နာမည်ပြောင်ကေဇင်ပုံးဖြစ်ခဲ့သည်)။
ရွှေရုပ်အမေးကို ကေဇင်ပုံးညစ်ကျယ်ကျယ်ပြုံးကာ ထွက်သွားသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်
``ဟားဟား…. ဟီးဟီး… ချစ်ကိုအဲ့တာကြောင့်ချစ်တာ အာဘွား……. ခိခိခစ်ခစ် ´´
ရယ်သံတွေ တောထနေသည့်နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် ကေဇင်ပုံး ၊
``ဟဲ့လမ်းလည်ခေါင်ကြီး အချစ်တွေ အနှစ်တွေနဲ့ ညည်းမရှက်ဘူးလား …. ´´
``မရှက်ပေါင်… လူအထင်ကြီးအောင်အော်နေတာ … ခိ…. ဒါဘဲနော် ချစ်…..´´
ရွှေရုပ်အမေးဖြေလက်စအပြင် တစ်ဖက်မှ သူ၏ ချစ်ဆိုသူအား နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတော့သည်။ ကေဇင်ပုံးသည် ထိုဖုန်းအား အကြွေးစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူလာကာ ထိုဖုန်းကြွေး သင်္ကြန်ကုန်မှပြတ်မည်ဟု ရွှေရုပ်ကိုပြောပြသေးသည်။ ထို့အပြင်
`` သမီးက ဖုန်းဘေကို တစ်လ ငါးထောင်ဘဲသုံးမှာ…..´´
ရွှေရုပ်သဘောကျသွားသည်။ ရွှေရုပ်သည်တစ်လလျှင် အမ်ပီတီကို လေးငါးသောင်းလောက်အလုပ်အကြွေး ပြုနေသည်မဟုတ်လား….
ကေဇင်ပုံးအသစ်ရသောဖုန်းကို ဂိမ်းထည့်ကာ အလုပ်မှပြန်လာတိုင်းကစားတော့သည်။ ထို့ပြင် ဖုန်းလာလည်း သူများတွေလို တိုးတိုးမပြောရွာလည်လမ်းတက်ကာ လမ်းကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်လျှောက်ပြီး အော်ပြောသည်။
``အေး …ဖုန်းလိုင်းမမိလို့ဟေ့ …. ဟုတ်ပ …. သေချင်းဆိုးတွေ … ပိုက်ဆံကျတော့ တစ်မိနစ်ငါးဆယ်တဲ့… အေးလေ….ဟေ …ကြားဘူး ဟင်……´´
ထို့နှင့်ကေဇင်ပုံး ဖုန်းရပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာတွင် ၀ိတ်ဆယ်ပေါင်ကျသွားတော့သည်။ ထို့ပြင် အပြင်မထွက်သော မျက်လုံးသည် နောက်စိသို့ကပ်ကာ မျက်လုံးဟောက်ပက်ဖြစ်ကာနေသည်။ ထို့ပြင် အရင်က ညတိုင်းမုန့်ဝယ်စားတတ်သော ကေဇင်ပုံးမှာ ရေချည်းသာ ဇွတ်သောက်နေတော့သည်။
``မမရယ် ဖုန်းက မရှိလဲကောင်းသား မီးပုံကိုကြည့်ပါဦး …ဒါတောင် မမတို့အိမ်လာနေလို့ မဟုတ်ရင် မီး တူးပိ(ဘလာစီယာ & ဆာစမိုင်နာ)တောင်ကပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး…´´
ရွှေရုပ်သည် သူမ၏ ပုံကိုကြည့်ကာ
``ညည်းပိန်နေတာဘဲ တူးပိမကပ်နိုင်လဲ အိုးမဲ သုတ်ထား အစဉ်ပြေသားဘဲ…´´
``ဘယ်ဆီကိုမင်းရောက်နေလဲ …… ဘယ်သူနဲ့မင်းရှိနေလဲ….´´
တူးပိရဲ့ ဖုန်းသံ အဲလေ ကေဇင်ပုံး၏ ဖုန်းထမြည်ပါတော့သည်။
``ဟယ် …. ချစ်…. အင်း…. ချစ်ဖုန်းကိုစောင့်နေတာ …. လိုင်းမကောင်းဘူးချစ်ရဲ့ …. အမ်ပီတီ ကလူတွေ ဘာညာကွိကွ…..´´
နေ့တိုင်းလိုလိုလဲ အမ်ပီတီဆိုတာချည်းက ဆဲခံထိနေတော့သည်။
``မမ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ချင်လို့ ခဏလောက်ဆက်ရမလားဟင်…´´
ဖုတ်ထော်(နာမည်ရင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်သော်လည်း ဆိုင်တွင် စာရိုက်နေစဉ် သူမကရွှေရုပ်အားစာကူခေါ်သည်။
`ကဗျာအား သိစေလိုသော ဆန္ဒများ ဖုတ်ထော်ရေးသားချက်အား´
`ဟင်… ဘာ….ဘာ….. ´´
`ကဗျာအားသိစေလိုသော ဆန္ဒများဖြင့် ဖုတ်ထော်ရေးသားချက်´
`ဟာမမကလဲ ဖုတ်ထော်ရေး….ရေး…. အဲလေ….ဟီးးးးးးးးးးး´
ထိုနေ့မှစကာ ရွှေရုပ်ပေးသူမအား နာမည်ပေးကင်ပွန်းတက်လိုက်တော့ မဖုတ်ထော်ဖြစ်သွားသည်။ ဖော်ထုတ်တာကို ပြောင်းပြန်ပြောလျှင် မည်သူမှ ဖုတ်တော်ဟုမပြောသော်လည်း ထို မဖုတ်ထော်ကတော့ ဖုတ်ထော်တော့သည်) ဖုတ်ထော်အား ရွှေရုပ်ဖုန်းပေးလိုက်သောအခါတွင်
``မေမေနော်…. သမီးကိုဖုန်းမပေးရင် စာမေးပွဲမဖြေဘူး… ဒါဘဲ …ဟင့်…. ဗျီးးးးးးး´´
`သြော်… မဖုတ်ထော်ဖုန်းတောင်းနေပါပကော…. နှပ်တွေထွက်လိုက် သုတ်လိုက် ရွှေရုပ်ဖုန်းပြန်ကိုင်လိုက်နဲ့ တော့အလုပ်ဖြစ်တော့သည်။ ထိုမဖုတ်ထော်၏ အရည်အချင်းနောက်တစ်ခုကား မည်သည့်ကိစ္စမဆိုခလုတ် တိုက်မှ ပြီးမြောက်သည်။ လမ်းတွင် လူပိတ်နေလျှင် လူကိုခလုတ်တိုက်သည်။ ကမူရှိလျှင် ကမူကိုခလုတ်တိုက်သည်။ မဟုတ်လျှင် သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းသူ့ဘာသာခလုတ်တိုက်သည်။ ရွှေရုပ် ရှမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်သည်ပင် သူ့ကိုမမီ ခုခေတ်ကလေးတွေများ စွမ်းချက် နိုင်းလောက်ရှိတော့သည်။
သူမလက်ထဲဖုန်းနီလေးတစ်လုံးပါလာသည်။ လူသာ လဲကျသွားသည် ။ ဖုန်းကိုကိုင်ကာလက်ကမြှောက်ထား သည်။ တယ်လီဖုန်းအတွက်ဆိုအသက်ပင်သေသေသဘောထားပုံရသည်။
``သမီးက ဖုန်းဘေကို တစ်လငါးထောင်ဘဲသုံးမှာမမရဲ့…´´
လာပြန်ပြီတစ်ယောက်ဟု စိတ်ထဲမှတွေးမိသည်။ အမ်ပီတီ အလှူရှင်တွေတစ်နေ့တစ်ခြားများလာသည်ဟုလည်း သက်ပြင်းချမိသည်။ ဖုန်းဘေသည် ရည်းစားရှိသူများပိုကုန်ကြသည်။ ရည်းစားများရန်ဖြစ်လျှင် ငါးထောင်တစ်ကဒ်ကား တစ်ရက်နှင့်ပင်ပြတ်သေးတော့သည်။ ရန်ဖြစ်လို့ မပြောတာမဟုတ် ဖုန်းရှိနေတော့ ရန်ဖြစ်သည့်အခါ … ``မဟုတ်ရပါဘူးကွာ… ဟုတ်ရပါတယ်ကွာ…. ဟုတ်သလိုလိုကွာ….(ရဲလေးလေသံနဲ့ဖတ် ရန်) စသဖြင့် ဖြေရှင်း …. သည့်အခါ စွဲချက်တင်သည့်အခါ… ထိုဖုန်းနှင့်သာ လေသံ အတက်အကျအနိမ့်အမြင့်ကို စိတ်ထဲကအတိုင်းပြောကြသည်။ ရန်ဖြစ်သည့်အခါ ပိုပြောကြသည်။ ပြန်ချစ်တော့လည်းပြောကြသည်။ ထိုနှင့် ကေဇင်ပုံးပြောသည့်တူးပိနီးလာပြီလားဟု ရွှေရုပ်ကိုယ်ရွှေရုပ်ပြန်ကြည့်မိတော့သည်။ တစ်ဆက်တည်း တော်တော်လှမှာဘဲဟု မဆီမဆိုင်တွေးမိသေးသည်။ ထို့နောက် ရွှေရုပ်၏ချစ်သူအား စိတ်မှမှန်းကာ ဖုန်းဖိုးကုန်သည့်အတွက် လောင်ချာနဲ့ ချိန်ပစ်လိုက်တော့သည်။
``ကလုံး …. ´´
မဖုတ်ထော်ဖုန်းပြောရင်းလိုင်းမိသောကြောင့်ချော်လဲသည့်အသံဖြစ်မှန်းသိလိုက်သည်။ဖုန်ထော်ဖုန်းသည် အထွက်မရ အ၀င်သာရသည် အထွက်ဆိုလျှင် နက်ဝက်ဘီးစီးဖြစ်သည့်အတွက် မက်စေ့သာပို့ရသည်။ ထို့အတွက် ဖုတ်ထော်သည် ရွှေရုပ်တို့အထဲတွင် ဖုန်းဘေးအနည်းဆုံးကုန်ကျမည့်သူဟု ယေဘူယျသတ်မှတ်လိုက်ပါတော့သည်။ဖုတ်ထော်သည်လဲ ထိုနေ့မှစကာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တော့သည်။
သူမ၏ဖုန်းမှာ တူ့တူတူဟု လည်းကောင်း ကလုံကလုံဟုလည်းကောင်းမက်စေ့ရိုက်လျှင်အော်ပါသည်။အချိန်တိုင်း ကလုံကလုံလဲကြားရပါတော့သည်။
နောက်နေ့များတွင် ``ဟားဟား ငါအိမ်သာတက်နေတာ….ခိခိ… ´´ဟူသောအသံများနှင့် ``ကလုံကလုံမြည်သောအသံများမှာ…. တူးပိဖြစ်ရန်အလားအလာများကြောင်းနှင့် သူမကြားကိုယ်မကြား စကားပြောရသော အမ်ပီတီဆိုသောနေရာဌာနအား လှမ်းကာမေတ္တာပို့ အမျှဝေကြောင်း( သေနာကျတွေ ခလုတ်တိုက်ပါစေ…. မဟုတ်လျှင် ဖားပြုတ်ကိုက်ပါစေ… မဟုတ်လျှင် တရုတ်ရိုက်ပါစေ….. မဟုတ်လျှင် … ဟင်…. စသည်ဖြင့်မေတ္တာပို့ပါတော့သည်…။
ရွှေရုပ်ရေးလက်စ ဖုန်းဆိုသော စာအား အွန်လိုင်းတင်ရင် ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်သောအခါ….
ချစ်သူဆီက မက်စေ့လာတယ်ဆိုကာ အမှန်အဆန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
``your balance is lower than the 200K …..´´
``ဟင်…… အမ်ပီတီက လူကြီးမင်းတွေ ခလုတ်တိုက်ပါစေ…. ဖားပြုတ်ကိုက်ပါစေ… တရုတ်ရိုက်ပါစေ…. မဟုတ်ရင်…ဟင်…….´´
Posted on 12/19/2013 by shweyoat
အင်္ကျီကို သုံးထပ်လောက်ဝတ်ပြီး အပေါ်က စောင်တစ်ထည်ထပ်ခြုံလိုက်သည်။ ထို့နောက် မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို ကြည့်ရန် တီဗီရှေ့မှာအသင့်အနေအထားဖြင့် သတိဆွဲပြီးသား။ အားပေးရအောင် အဖော်ပါအောင် အိမ်ရှေ့တွင် အိမ်ငှားနေသော ညီမနှစ်ဦးအားစည်းရုံးကာ ခေါ်ထား ပြီးလည်း ဖြစ်၏။ တီဗီရှေ့တွင် ရွှေရုပ်၏ ကျွေးသဖခင် ကျေးဇူးရှင် နေရာယူကာ အဖေ့နောက်မှာ ရွှေရုပ်၊ ဘေးတစ်ချက် တစ်ချက်မှာ ညီမနှစ်ယောက် နေရာယူကာ စောင့်ကြည့်နေတော့သည်။
မြန်မာအမျိုးသမီး အသင်း နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုသောအချိန်တွင် ရွှေရုပ်ပါ လိုက်ဆိုနေမိသည်။ ထို့နောက် ဒီရပ်ကွက်မှာ ရွှေရုပ်တို့ဘဲ ဒီဘောပွဲကို တီဗီကကြည့်ပြီးအားပေးမှာပါလားဟု အားငယ်စိတ်ဖြစ်မိသေးသည်။ (ရပ်ကွက်ထဲမှ ဘောလုံးအားပေးပြီဆိုလျှင် ပရိမီယားလိစ် ဆိုတာမျိုးမှ ဒါတောင် ဇယားချထားတဲ့ စာရွက်လေးရှေ့ချချကာ ဘောပင်လေးတွေနဲ့ အားတက်သရောအားပေးကြတာမျိုး… ကြုံလို့ပြောပြတာ)
အရှေ့ကထိုင်နေသောအဖေ့အသံကို အမြင်ကတ်မိသည်။ ဘယ်နှယ့် နိုင်မယ်မပြောဘူး ။
``အဖေပါးစပ်ပုတ်တွေနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့နော် တစ်ခုခုများလွဲသွားရင် အဖေ့ကို မီးမခေါ်တော့ဘူး…´´
ကလေးဆန်စွာပြောမိသည်လည်းသိပါသည်။ သို့ပေမယ့် နိုင်လိုဇောက ထိန်းမရပါ။ ပြစ်တင်ဘောတွေအကြားမှာ လဲကျလိုက်တဲ့ တိုင်းအသင်းက အမျိုးသမီးတွေ လဲလိုက်ပြီလားဆို အပြာရောင်တွေချည်း ။ သူုတို့လဲကျသွားရင် ရွှေရုပ်အင်မတန်ပျော်သည်။(ထင်ချင်သလိုထင်ပါ) သို့သော် လူးလိမ့်နေသော အပြာရောင်မတွေက မြေကြီးမှာ မပဋာမြေလူး အဲ့လိုလူးလိမ့်နေပြီး ပြစ်ဒဏ်ဘောပေးတာနဲ့ ပြန်ထလိုက်တာ အကောင်းမို့ အမြင်လဲတော်တော်ကတ်သည်။ နောက်တစ်ခါ လဲကျတော့
`` လဲနေတုန်း လည်ပင်းတက်နင်းလိုက်ပါလား ညီမတို့ရယ် …´´
ဆန္ဒတွေက အသေသတ်ချင်စိတ်တွေပေါက်ပေါက်လာတော့သည်။ ဘေးက ညီမနှစ်ယောက်မှာလဲ တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နှင့် ဘောပွဲအားပေးမှုက ပီပြင်လာတော့သည်။ အဖေကို သတိမထားမိတော့ ။ အိန္ဒိယမှ ကုလားမဒိုင်ကို ၀က်သားကျွေးချင်စိတ်တွေပေါက်ပေါက်လာသည်။
``သောက်ကုလားမ …. ရုပ်ကိုက အိမ်မြှောင် မိတ်လိုက်နေတဲ့ပုံနဲ့ ကျက်သရေကိုမရှိဘူး…´´
``အဲ့အိမ်မြှောင်တောင်မှ ထမင်းခုနှစ်ရက်မစားရတဲ့အိမ်မြှောင်နေမယ်… ရုပ်ကိုက အရိုးခေါင်းခြောက်ရုပ်နဲ့´´
ပထမပိုင်းမှာတင် လူကျွံဘောကနေ ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးက ရင်နာစရာဖြစ်သည်။
``ပေးလိုက်တယ်…. သေစမ်း ကုလာမ´´
ရွှေရုပ်တို့ပြောသည်မဟုတ်ဘဲ အိမ်နောက်ဘက်အိမ်မှ အလွန်ရိုးအေးသော ညီမများ၏ အသံဖြစ်သောကြောင့် အနောက်ဘက်ကိုအသာနားစွင့်မိသည်။
``သောက်ညစ်ပတ် … မိုက်ရိုင်းတာ …လူပါးဝတာာ…´´
``အိမ်နောက်ဘက်က ညီမတွေလဲ အားပေးကြတယ်ဖေကြီးရဲ့ ။ ၀မ်းသာလို့ပါ။ ကုလားမကို တစ်တိုင်းပြည်လုံးဆဲနေရောပေါ့ … သောက်ကုလားမ…´´
မြန်မာအမျိုးသမီးတို့၏ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် မျိုးချစ်စိတ်တို့ကို လေးစားမိသည်။ အမှန်ဆို တိုင်းဘောလုံးအမျိုးသမီးများသည် ရွှေရုပ်တို့ မြန်မာအမျိုးသမီးများထက် အရပ်ပိုရှည်သည်။ ကစားပုံသာသည်။ သို့သော်… ရွှေရုပ်တို့ မြန်မာအမျိူးသမီးများသည် အင်မတန်ရဲရင့်သည်။ သူတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာ သူရဲကောင်းတွေ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်နှင့်လဲ၍ တိုက်ပွဲဝင်နေသည်နှင့်တူသည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးဘက်မှ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ကန်သွင်းလိုက်သော ဘောလုံးမှာ ထိုင်းဂိုးပေါက်ထဲသို့ ၀င်သွားတော့သည်။ ရွှေရုပ် ထိုင်ခုံမှ ထကာ အော်မိသည်။
``ဂိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး မြန်မာကွ…… အဲ့ဒါ မြန်မာကွ …..´´
ရွှေရုပ်အသံနှင့် အနောက်အိမ်က အသံတို့အတူတကွထွက်လာတော့ ခေါင်းရင်းဘော်ဒါက စာသင်နေတဲ့ ကလေးများသည်
သူတို့ ဘောလုံးပွဲမကြည့်ရပါ။ စာသင်နေရသည်။ သို့သော် စာသင်ရင်းနှင့်ပင် မြန်မာအသင်းအား အားပေးနေကြသည်ဖြစ်မည်။ သို့သော် လူကျွံဘောဟုဆိုကာ ကုလားမဒိုင်မှ ဂိုးမပေးပါချေ။
``အဖေရာ အဲ့ကုလားမ လူပါးဝပြန်ပြီ …..ခွေးသူတောင်းစားမ… ´´
သို့နှင့် ဒုတိယပိုင်း အချိန်ပြီးခါနီးသို့ရောက်လာတော့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှခြေရွေးစင်များကလဲ တစ်ဖုန်းဖုန်းလဲသည်။ လဲတိုင်းလဲရွှေရုပ်မှ
မေတ္တာရှေ့ထားအော်ရသေးသည်။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ အစီစဉ်ကြေငြာသူလဲ
``လူကပ်ထားရန်လိုပါတယ်ခင်ဗျ….. အဟွင်း ဂိုးလွန်ဘောပါခင်ဗျာ….. မြန်မာအမျိုးသမီးများ တစ်ဦးချင်းလူကပ်ထားဖို့ကို အလွန်အားနည်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ…… အခုချိန်မှာမှ ပြန်လည်ချေပ ဂိုးမဂိုးနိုင်ရင် နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အသေချာပါဘူးခင်ဗျ…´´
``သြော် သူပြောမှသိတယ် … စိတ်လေပါတယ်ဆိုမှ …´´
အသံတို့တိတ်ကုန်ပါသည်။ ကွင်းတွင်းမှာ အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကလဲ အသံတို့တိတ်ကုန်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောက်ဆုံးမိနစ်တွေမှာ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကို ချေပဂိုးပြန်သွင်းနိုင်အောင် ရွှေရုပ်လို ဘုရားစာရွတ်နေကြမည်ထင်သည်။ ရွှေရုပ်တွင်ခြုံထားသော စောင်ကား ထိုင်ခုံချေရင်းတွင် အပုံလိုက်ပင်။ ခေါင်းမှခေါင်းစွပ်မှာလဲ ဘယ်ထားမိမှန်းမသိပေ။ လူက မချမ်းတော့ ။ စိတ်ပူတာရော ၊ဒေါသဖြစ်တာရော၊ စုံလင်စွာနှင့် ဘုရားစာကို အဆက်မပြတ်ရွတ်နေမိသည်။ ထိုင်ခုံပေါ်တွင်လည်း သေချာမထိုင်ဖြစ်။ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ဆောင်ကြောင့်ထိုင်ကာ လက်အုပ်ချီရင်း မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲကို မျက်ရည်ဝိုင်းလျှက်ပင် အားပေးနေမိသည်။
မိနစ်ကိုးဆယ် အကျော်မှာပင် ။ မြန်မာဘက်မှချေပဂိုးပြန်သွင်းနိုင်တော့သည်။
ရွှေရုပ်ထအော်ရင်း အသံပင်ဝင်သွား၏။ ခုန်ပြီး မြန်မာဟေ့ မြန်မာဟေ့ဟု အားပေးမိသည်။ ရွှေရုပ်တို့တစ်ရပ်ကွက်လုံး ဂိုးဟူသောအသံ နှင့် အတူ ရွှေရုပ်မျက်ရည်တွေနဲ့ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုမိတော့သည်။ရွှေရုပ်တို့ တနိုင်ငံလုံး ညီမငယ်တွေကို အားပေးနေကြသည်ဖြစ်မည်ဟု စိတ်ပျော်ရွှ့င်စွာတွေးမိပါသေးသည်။
``တော်သေးတာပေါ့ …. ဘုရားကယ်လို့….. ´´
သို့နှင့် အချိန်ပိုကစားသည်။ အချိန်ပိုတွင်လည်း သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှ တစ်လုံးထပ်မံသွင်းယူသွားသည်။ ဘာစကားမှမဆိုမိတော့ ။ဒုတိယပိုင်းအချိန်ပိုကိုသာ စောင့်မိတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင်း ရှုံးသွားခဲ့လျှင်လည်း ရွှေရုပ်ကျေနပ်မိတော့မည်။ သို့သော် အံ့သြယူရသည် ။ မြန်မာမိန်းကလေးဘောလုံးအသင်းတွေက အရှုံးနဲ့ မကျေနပ်နိုင် အသက်သေရင်သေပါစေဆိုသောပုံရသည်။ သူတို့ဆီမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ အပြည့်ရှိသည်။ မိနစ်(၁၂၀) လုံး တစ်ကွင်းလုံးပတ်ပြေးနေကြသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ချွေးတွေရွှဲနစ်နေသည်။ သူတို့စိတ်ဓါတ်မကျသွား ။ သူတို့ကား သံမဏိစိတ်အပြည့်ပင်။ ထို့နှင့် နောက်တစ်လုံးချေပဂိုး လိုက်သည့်အခါတွင်မတော့ ရွှေရုပ်တို့နိုင်ပြီဟု သိလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့် ကံတရားက ဥာဏ်များတော့သည်။ ညီမငယ်တို့ အသည်းအသန် ကြိုးစားကစားသော်လည်း ပင်နယ်တီဖြင့် ရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရွှေရုပ်တို့ ရပ်ကွက်တွင် အပ်ကျသံပင်မကြားရတော့ ။ ညီမငယ်တို့ ငိုသည့်ပုံကိုကြည့်ပြီး ရွှေရုပ် မရှိုက်ဘဲ မျက်ရည်ကျသည်။ မည်သူ့ကိုမှ မနှုတ်ဆက် အိပ်ခန်းထဲဝင်ကာမည်သည်ကိုစိတ်တိုရမှန်းမသိ။ နောက်ဆုံးတော့ ကုလားမဒိုင်ပင်စိတ်တိုရတော့သည်။ သောက်ကုလားမဒိုင်။ ဘယ်နှယ့် အရှေ့တောင်အာရှဖလားရမလဲ ။ ကုလားမညစ်မှတော့ တကယ့်ဖိုင်နယ်တက်မယ့်သူလဲ အာရှဖလားနှင့် မထိုက်တန်တော့ ကုလားမဖလားဘဲထိုက်တန်တော့မည် ဖြစ်သည်။
Posted on 12/16/2013 by shweyoat
Posted on 10/18/2013 by shweyoat
ဒီညသူ(ကျွန်တော့သခင်)အရက်သောက်နေတာတွေ့ရသည်။ယခင်အရက်သောက်စဉ်ကလိုမဟုတ်ယခင်က ပြုံးပျော်ကာစကားဖောင်ဖွဲ့တတ်သလောက်ယခုသူမည်သည့်စကားမှမပြော။တစ်ငုံသောက်လိုက်မျက်ရည်တစ်စက်ကျလိုက်နှင့်အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်နေပုံပင်။အမြည်းပင်မရှိ။ထို့နောက်သူခြံရှေ့သို့လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း မျက်တောင်လုံးဝမခတ်ဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာလုံးဝမလှုပ်ဘဲမျက်ရည်တွေ ဒလဟောကျလာတော့သည်။ "ရှုး "	အမေ့နှာမှုတ်သံကိုကြားရသည်။ ကျွန်တော်အမေ့ကိုကြည့်တော့လဲ အမေလဲမျက်ရည်ဝဲနေသည်။ ခြောက်ဆယ်ဝပ် မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်မှာ အမေသူမ၏ အမြီးနှင့် ခြင်/ယင်ခတ်ကာ နေသည်။ ဘာတွေ ဖြစ်နေကြတာလဲဟုစဉ်းစားရင်း သူ့ကို လှမ်းကြည့်မိသည်။ သူ အရက်ပုလင်းအား လည်ပင်းမှဆွဲကာ ကျွန်တော်တို့ဆီလာနေသည်။ အနီးရောက်မှ သူ့မျက်နှာအား သေချာကြည့်မိသည်။ မျက်ခွံများမို့မောက်ကာ နှာခေါင်းထိပ်များနီရဲကာနေသည်။ ကျွန်တော့ခေါင်းအားပုတ်ကာ အမေ့ဘက်သို့လှည့်သည်။ ထို့နောက် အမေ့ကိုဖက်ကာငိုတော့သည်။ ထိုအခါ အမေ့ရဲ့ ၀ဲနေသည့်မျက်ရည်တွေလည်းတာကျိုးသလိုပင် ဖြာဆင်း ကျလာတော့သည်။ ဒီညတွင် သူ၏ငိုသံနှင့်တစ်ခြံလုံးဖုံးသွားတော့သည်။ သူသည် လွန်စွာမှဆင်းရဲသူဖြစ်သည်။ သူ့တွင်မိခင်အိုကြီးတစ်ဦးရှိကာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့သားအမိဘဲရှိသည်။ သူ၏မိခင်ကြီးအား ကျွန်တော့်အမေနှင့်အတူ လုပ်ကျွေးနေသူဖြစ်သည်။ မနက်လင်းလျှင် လယ်ငှားလိုက်သည်။ ယခုသူ၏မိခင်ကြီးနေမကောင်းဖြစ်ကာ တဲအတွင်းမှ ချောင်းဆိုးသံများကြားရသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ညည်းသံကြားရသည်။ တစ်နေ့က အသားမဲလူသုံးယောက်နှင့်ခြံရှေ့တွင်စကားပြောဆိုသည်ကို တွေ့ရပြီးကတည်းက သက်ပြင်းတချချနှင့် စိတ်ဆင်းရဲနေပုံဘဲတွေ့ရတော့သည်။ "မိနီမရယ် ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါဟယ်….. ငါမတတ်သာလွန်းလို့ လုပ်ရတာပါ …..အီး…ဟီး….ဟီး…ဟီး….." ဒီညတော့ ထိုငိုသံများနှင့်ကျော်ဖြတ်ရတော့သည်။ ×××××××××× မနက်ရောက်လေပြီ။ ကားတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ခြံရှေ့ လာရပ်သည်။ အနက်ရောင်ကားကြီးမှာ ပြောင်လက်နေသည်။ အနက်ရောင်ကားကြီးပေါ်မှ လည်ကတုံးအင်္ကျီအဖြူရောင်နှင့် အသားအနက်ရောင် လူကြီးနှစ်ယောက် ဆင်းလာကြသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်အကြီးကြီး တစ်ခုကိုချိုင်းကြားညှပ်ကာ သူ၏တဲထဲကို လှမ်းကြည့်သည်။ သူယိုင်နဲ့နေသော ခြေလှမ်းများဖြင့် ထိုလူကြီးများအနီးသို့ လျှောက်လာသည်။ "အဟွတ်….အဟွတ်….." တဲအတွင်းမှ ချောင်းဆိုးသံကြားတော့ခြေလှမ်းကိုရပ်ကာ ဆက်လျှောက်သည်။ သူတစ်ညလုံးငိုထားသော မို့အစ်အစ် မျက်ခွံများအတွင်းမှ မျက်လုံးတို့အားပြူးကာ ထိုလူကြီးနှစ်ယောက်အား ကြည့်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး မျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လှည့်ကာနေသည်။ "လှသားဘဲ ကြိုက်တယ်……." "ကြိုက်တယ်လုပ်မနေနဲ့ ဒီနေ့လုပ်ရမှာ ၀ယ်လိုက်တော့…." ထိုလူကြီးနှစ်ယောက် အမေ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြပြီး အမေကတော့ မျက်ရည်ကျရှာသည်။ ကျွန်တော်စဉ်းစား မရခင်မှာထိုလူကြီးနှစ်ယောက် သူ့အားပိုက်ဆံအထပ်လိုက်ပေးလိုက်ကြသည်။ သူပိုက်ဆံကိုင်ကာ တဲထဲသို့ပြေးဝင်သွားသည်။ ထိုလူကြီးတွေလဲကားပေါ်တက်ကာ ပြန်သွားကြလေသည်။ ခဏအကြာမှာတော့ အရုပ်ဆိုးဆိုးနှင့် လူတစ်စု အမေ့အားလာဆွဲကြသည်။ အမေသည် ကျွန်တော့အား တစ်ချက်ကြည့်ကာ ထိုလူတွေနောက်လိုက်ဖို့ပြင်သည်။ " အဲ…….အဲ……." အမေယခုကဲ့သို့ အသံကျယ်ကျယ်နှင့်အော်သံမကြားဖူးသဖြင့် ကျွန်တော်အတော်ပင်တုန်လှုပ်သွားသည်။ ကျွန်တော်လဲ အမေ့ကို မလိုက်သွားပါနဲ့ဟုထားသည်။ ကျွန်တော်အသံတော်တော်ဆူညံသည်ထင်၏။ သူ တဲအတွင်းမှပြေးထွက်လာပြီးကျွန်တော့အား ဖက်ကာငိုတော့သည်။ "မိနီမရေ အမေ့အသက်ကို ကယ်တယ်လို့သဘောထားပါပေးပါဟာ…." သူ၏ငိုသံကြီးနဲ့ပြောတဲ့စကားနောက်မှာ အမေထိုလူစုနောက်ငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါသွားတော့သည်။ ကျွန်တော်လဲ အော်ခေါ်ရတာမောသွားသဖြင့် ငြိမ်သွားသည်နှင့် သူ ခြံပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတော့သည်။ ခဏကြာတော့ဆရာဝန်တစ်ယောက်သူနှင့်အတူပါလာသည်။ သူတို့ခြေလှမ်းတွေမှာသွက်လှသည်။ တဲအတွင်းသို့ အလျင်စလိုဝင်သွားကြသည်။ တဲအတွင်းမှ သူ၏အမေချောင်းဆိုးသံကျယ်ကျယ်ကိုကြားရသည်။ "အမေသတိထားလေ အမေ….အမေ …. " "အမေ………………………………" သူ၏အော်သံမှာ တစ်လောကလုံးကြားလောက်သည်ဟုထင်သည်။ ထို့နောက်သူ တဲအတွင်းမှပြေးထွက်ကာ ခြံပြင်သို့ပြေးထွက်သွားသည်။ "မိနီမရေ အမေ့အသက်မမှီတော့ဘူးဟ……." ××××××××××× ထို့နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏အမေအသံကိုမကြားရတော့သလို ကျွန်တော့်အမေရဲ့ အသံ အနံ့ အထိအတွေ့တို့ကိုလဲ မတွေ့ရတော့။ အချိန်တွေပြောင်းတာနှင့်အတူ သူနှင့်ကျွန်တော်၏သံယောဇဉ်မှာလဲ ပိုကြီးလာတော့သည်။ ကျွန်တော့နာမည်မှာ ရွှေတိုးဖြစ်ပြီး သူက ကျွန်တော့ကိုသားဟုသာတွင်တွင်ခေါ်သည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အလုပ်အတူကြိုးစားကြသည်။ သူပိုက်ဆံစုသည်။ ထိုပိုက်ဆံစုသည်မှာအကြောင်းရှိ သည်။ သူမင်္ဂလာဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သူမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပိုကြိုးစားရသည်။ သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်မှာ ကျွန်တော့် ကိုသံယောဇဉ်သိပ်မရှိပုံပင်။ ကျွန်တော့်ကိုရေတောင်မတိုက်ဖူးပေ။ သို့သော်ကိစ္စမရှိချေ။ သူ ကျွန်တော့ကို ဂရုစိုက်လျှင်ဘာမှမလို၊ ကျွန်တော့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပြီဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ကသူ ကျွန်တော့အား ကလေးပိစိလေးတစ်ယောက်ချီကာ လာပြသည်။ "သား ဒီမှာကြည့်စမ်း မင်းမှာ ညီလေးရပြီ…… ညီလေးရပြီကွ…." ကျွန်တော်အသဲယားလာပြီး နမ်းကြည့်ရင် ကြိုးစားသောအခါ သူက သဘောတကျအော်ရီကာ "နေဦးကွ သူကြီးလာမှ မင်းနဲ့အဖော်ရမှာ အခုငယ်သေးတယ်" "ယောင်္ကျားရေ …..ဟင်…..ကြည့်စမ်း ကလေးကိုအဲ့နွားနားခေါ်သွားစရာလား ….ခုဒီခေါ်လာခဲ့……" အသံစွာစွာနောက်ကိုသူလိုက်သွားရတော့သည်။	×××××××××××× "ရှင်ဒီနွားမရောင်းရင် ဘယ်ကပိုက်ဆံရမလဲဟင်…..မဟုတ်ရင်ရှင့်သားသေမှာပေါ့…" "မလုပ်ပါနဲ့မိတင်ရယ်………..ငါသားကိုမလုပ်ပါနဲ့….." "ဘာ………နွားက ရှင့်သားဆိုရင် အခုဆေးရုံတက်နေတဲ့ကလေးဘာတုန်းရှင်မိုက်ရိုင်းလှချည်လား…. ရှင်မလုပ်ရင်နေ…. ကျမရောင်းမယ်…. ကံကောင်းလို့ အစ်နေ့နှင့်ကြုံတာ မဟုတ်ရင် ရှင့်ကလေးခွဲစိတ်ခတောင်မှီမှာမဟုတ်ဘူး….." အသံတို့က ကျွန်တော်ရောင်းကုန်ဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရသည်။ သူ၏မိန်းမထမီစွန်တောင်ဆွဲကာ ခြံထဲမှထွက်သွားသည်ကို ကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိတော့သည်။ ××××××××××× ဒီညသူ(ကျွန်တော့သခင်)အရက်သောက်နေတာတွေ့ရသည်။ယခင်အရက်သောက်စဉ်ကလိုမဟုတ်ယခင်က ပြုံးပျော်ကာစကားဖောင်ဖွဲ့တတ်သလောက်ယခုသူမည်သည့်စကားမှမပြော။တစ်ငုံသောက်လိုက်မျက်ရည်တစ်စက်ကျလိုက်နှင့်အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်နေပုံပင်။အမြည်းပင်မရှိ။ထို့နောက်သူခြံရှေ့သို့လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း မျက်တောင်လုံးဝမခတ်ဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာလုံးဝမလှုပ်ဘဲမျက်ရည်တွေ ဒလဟောကျလာတော့သည်။ ဒီညသူကျွန်တော့်ကိုဖက်ကာငိုတော့သည်။ "သားရယ် အဖေလူမိုက်ကြီးပါ…. အဖေ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါကွယ်……" ဒီညသူကျွန်တော်နှင့်အိပ်သည်။ သူ၏မိန်းမတဲတံခါးကိုပိတ်ကာ အထဲတွင်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ခါတဲအတွင်းမှ ရှိုက်သံသဲ့သဲ့ လေနှင့်အတူပါလာသည်။ ×××××××××××	မနက်ရောက်ပြီ။ ကားတစ်စင်းကျွန်တော့်ကို ခြံရှေ့လာရပ်သည်။ အနက်ရောင်ကားကြီးမှာ ပြောင်လက် နေသည်။ အနက်ရောင်ကားကြီးမှလည်ကတုံးအင်္ကျီအဖြူရောင်နှင့်အသားအနက်ရောင် အမေ့ကလှည့်တုန်းကလို လူကြီးနှစ်ယောက်ဆင်းလာကြသည်။ သူတို့အမေ့တုန်းကလိုကြည့်ကာ ကျွန်တော့်ကိုလဲ "လှသားဘဲ ကြိုက်တယ်………" "ကြိုက်တယ်လုပ်မနေနဲ့ ဒီနေ့လုပ်ရမှာ ၀ယ်လိုက်တော့" ထိုလူကြီးတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်မှ ငါးထောင်တန်အထပ်လိုက်ကို သူ့မိန်းမအားပေးလိုက်လေသည်။ ထိုပိုက်ဆံ တို့အား သူ့မိန်းမတို့အားသူ့မိန်းမယူသွားပြီး ခြံအပြင်ပြေးထွက်သွားသည်။ ခဏနေတော့ လူတစ်စု ကျွန်တော့်ကို ဆွဲခေါ်ကြသည်။ ကျွန်တော်မလိုက်ချင် သူ့အားခေါ်မိသည်။ "အဲ……အဲ……" "သား….." တဲအတွင်းမှသူပြေးထွက်လာသည်။ ကျွန်တော့်ဆီတော့မဟုတ်။ကျွန်တော်ခြံဝရောက်နေပြီ ။သူကျွန်တော့်တင်းကုတ်ဘေးက သရက်ပင်ကို မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာလက်သီးနှင့်ထိုးနေသည်။ ကျွန်တော်အတင်းရုန်းသော်လဲမရ။ ကျွန်တော်အမေထိုလူစုခေါ်သွားပြီး ဘာကြောင့်ပျောက်သွားသည်လဲဟု ကျွန်တော်သိခွင့်ရတော့မည်။ ကျွန်တော်ခြံနှင့်အတော်ဝေးဝေးကို ရောက်လာခဲ့ချေပြီ……………… ×××××××××××××××××××××× ရွှေရုပ် 3:30PM 16.10.203
Posted on 5/25/2013 by shweyoat
``ရွှေ့ရုပ်´´ အသံကြောင့် အိမ်ရှေ့သို့ကြည့်ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲမှ မမကြီးများဖြစ်သည်။ လက်ထဲမှာလဲ လျှောက်လွှာစာရွက်တွေနှင့် ။ ရွှေရုပ်ကိုတွေ့တော့ အားလုံး မျက်နှာကြီးများပြုံးသွားကြသည်။ ဘာတုန်း ..... ရွှေရုပ် ဘာမှန်းမသိတဲ့အထဲ ပြန်ပြုံးပြရသည်။ ထို့နောက် ရွှေရုပ် ခြံတခါးနားသို့သွားကပ်ကာ ``မမတို့ အလှူလိုက်ခံနေတာလား ....ဟင်းဟင်း အဲ့ဒါဆို အဖေမရှိဘူး..´´ ``ဟီးဟီး .. မဟုတ်ဘူး ရွှေရုပ်ရဲ့ အမတို့က တိုင်ပင်စရာရှိလို့လာတာ ...´´ ရွှေရုပ် မျက်ခုံးပင့်မိသည်။ ``ရွှေရုပ်ကို ´´ ``အင်း..´´ ``အမတို့က ´´ ``အင်းလေ ... အဲ့ဒါ ...အဲ့ဒါ အထဲဝင်မယ်လေ အေးအေးဆေးဆေးပြောကြတာပေါ့´´ ``သြော် ... ဟုတ်ကဲ့ ...´´ ရွှေရုပ် အမြန်ပင် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်မိသည်။ ထို့နောက် အပြုံလိုက်ကြီး ရွှေရုပ်ကို တွန်းတိုက်ပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားကြသည်။ ခိုးခိုးခစ်ခစ်နဲ့ လက်ပံပင် ဆက်ရက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ အမေ့စကားကိုပြန်ကြားမိသည်။ ရွှေရုပ်အ်ိမ်ထဲရောက်တော့ သူတို့က ရွှေရုပ်ဧည့်ခန်းက ဆက်တီတွေမှာ စနစ်တကျ ခြေချိတ်ထိုင်လို့ .... ``လာရွှေရုပ်...´´ အမယ် သူတို့ကဘဲ ကြီးကျယ်လို့ ... ရွှေရုပ် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ချာလပတ်လည်ရင်း ဘယ်နားထိုင်ရမှန်းမသိ ။ ထို့နောက် ချောင်တစ်နေရာကို အသေချာရွေးကာ ထိုင်ချလိုက်ရင်း သူတို့ကိုကြည့်လိုက်သည်။ ``ရွှေရုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ် ... သူက မြို့ကလာတာ ... နာမည်က ပိုပိုရှုပ်တဲ့ ... အရင်တုန်းကတော့ ကျောင်းသားပေါ့ .... ´´ ရွှေရုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးကို ကြည့်မိသည် ။ထိုအမျိုးသမီးက ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ ရယ်ပြသည်။ ရွှေရုပ်လဲပြန်လည်ရယ်ပြရင်း .. ` `ရွှေရုပ်ကတော့ အရင်တုန်းက ကျောင်းသူပါ ... ကျောင်းသားမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး အမက အရင်တုန်းက ယောင်္ကျားလျာလား....´´ ထိုအမျိုးသမီး မျက်နှာကြီး ညိုသွားသည်။ ရွှေရုပ်မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ရွာခံ အမကြီးက ``ဟယ် ...ရွှေရုပ်ကလဲ နင်အဲ့လိုမပြောရပါဘူး သူကငါတို့ အကျိုးစီးပွား အတွက်လာတာ ...´´ ရွှေရုပ်အံ့သြသွားသည်။ ``ဟင် အမက ရွှေရုပ်တို့ရွာမှာ စက်ရုံလာထောင်မလို့လား ဘာစက်ရုံလဲ ´´ ``မဟုတ်ပါဘူး .... ညီမလေးတို့ရွာလည်လမ်းကိစ္စပါ....´´ ရွှေရုပ်ထပ်ပြီးအံ့သြသွားသည်။ ``သြော် ... အမက ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးမလို့လား... ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အမရယ် ...ကျမတို့ကလဲမတတ်နိုင်တာလေ ..ကျေးဇူးပါ ...´´ ``ဟင် မဟုတ်ပါဘူး ...´´ ထိုအမကြီးမှပြာပြာသလဲ ငြင်းတော့သည်။ ထိုအခါ ရွာခံအမကြီးက ``ရွှေရုပ်ကလဲ အားနာစရာကွယ် ...အခုဟာက လူကြီးတွေက ရွာလည်လမ်းခင်းရအောင်ဆိုပြီး ခြံတွေကို နှစ်ပေတိတိ နောက်ကိုဆုတ်ပြီး ခြံစည်းရိုးပြန်ကာခိုင်းတဲ့ကိစ္စကို ရှင်းပေးမလို့ .... ´´ ရွှေရုပ် အထူးအဆန်းထိုအမကြီးကိုကြည့်မိသည်။ ထိုအခါ ထိုအမကြီးမှ ``ဟုတ်တယ်ရွှေရုပ် ရွှေရုပ်တို့ခြံတွေက ဘိုးဘွားပိုင်ခြံတွေလေ ... အဲ့ဒါ ခုခေတ်ကျမှ နောက်ဆုတ်ရတော့ ရွှေရုပ်တို့အတွက်မတရားဘူး ...အဲ့အတွက် မမလာခဲ့တာ ...´´ ရွှေရုပ်ထိုင်နေတဲ့နေရာကို ဟန်ချက်ပြင်လိုက်ရင်းနှာခေါင်းရှုံ့လိုက်မိသည်။ အပိုတွေ ... ရွာလည်လမ်းရှိရင် ကိုယ့်အိမ်တွေ ကိုယ့်ခြံတွေတောင် အလကားနေ နှစ်ပေမက ဈေးတက်သွားနိုင်သည်။ ခုတော့ ဘာကျောင်းသားမှန်းမသိတဲ့ အမျိူးသမီးကိုခေါ်ပြီး ``ရွှေရုပ် ...´´ ရွှေရုပ်အတွေးတို့ရပ်သွားရသည်။ ထို့နောက် ရွှေရုပ်ထိုအမျိုးသမီးကို ကြည့်လိုက်ရင်း ``အဲ့ဒါအမနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ ...အမကဒီကရွာသားလား....´´ ထိုအမျိုးသမီး ဒုတိယအကြိမ်မျက်နှာကြီးညိုသွားပြန်သည်။ ထို့နောက် ``အမက ဒီကရွာသားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်... ဒါပေမယ့် ညီမလေးတို့အနေနဲ့ ကိုယ့် မြေတွေပေးလိုက်ရတော့ အင်မတန်မှ နစ်နာလှပါတယ် ... အဲ့ဒါကြောင့် ....မမက ...´´ သူ့ကိုစကားဆုံးအောင် ပြောခွင့် မပေးနိုင်တော့ထို့ကြောင့် ``မမက ဘာလုပ်မလို့လဲ ..... မမနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ .... ´´ ``အို .... မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေအကုန်လုံးမမတို့အရေးပေါ့ .... ´´ ``သြော်... ဒါဆို ရွှေရုပ်ကြောင်လေးဝမ်းချုပ်နေတယ် မမ...´´ ထိုအမကြီး မျက်နှာက ညိုရာကနေပြီး အနက်နုရောင်သို့ပြောင်းလာတော့သည်။ ``အဲ့ဒါတော့ ၀မ်းနုတ်ဆေးတိုက်လိုက်ပေါ့ ရွှေရုပ်ရယ် ညည်းက အရမ်းအစသန်တာဘဲ အမရယ်တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ သူက စာလဲရေးတယ် ... ပြီးတော့ ပေါက်ကရတွေလဲ အရမ်းပြောတော့လေ ...´´ ထိုအမကြီးသည် ရွှေရုပ်ကိုထပ်ကြည့်လိုက်ပြီး ``အဲ့ဒါ ညီမလေးတို့ ဆန္ဒပြရမယ် ...´´ ဒီတစ်ခါတော့ ရွှေရုပ် အံ့အားသင့်သွားကာ ``ဆန္ဒက ဘယ်သူ့ကိုပြရမှာလဲ ... ´´ ``ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါ ဆန္ဒပြတာတော့ဟုတ်ပါပြီ ဘယ်သူ့ကိုပြကြမလဲ ...´´ အိမ်ထဲရောက်နေသော မမအားလုံးက အသံတွေထွက်လာကြသည်။ ``ဟုတ်တယ် ... ပြချင်နေတာကြာပြီ .... ဘယ်သူ့ဖြစ်ဖြစ် ပြလိုက်တော့မယ်...´´ ``ဘယ်သူ့ကိုပြရပါ့ ....´´ ``ဟုတ်တယ် တစ်နိုင်လုံးက ပြနေကြတာ ကိုယ့်ကလှည့်မှ ဘယ်သူ့ပြရမှန်းမသိဘူး ပြတော့ပြရမယ် ... ´´ ထိုအခါ အရင်တုန်းက ကျောင်းသား ဟု ပြောသောအမျိုးသမီးက ``ညီမတို့ပြရမှာက ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ....´´ ``ဟာ .... ရှက်စရာကြီး ......´´ ``လူတွေအများကြီးဘဲလားဟင်...´´ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အသံတွေညံသွားသည်။ ``ဟုတ်တယ် မမတို့ပြရင်တော့ လူတွေအကုန်လာကြည့်ကြမှာ အဲ့ကျမှ အ၀ပြမယ် ... စည်းကမ်းရှိရှိ တန်းစီလှည့်တန်းပြီးပြမယ် ....´´ အတင်းကာရောပြချင်နေတော့သည်။ ထိုအခါရွှေရုပ်က ``အမအဲ့လိုပြတာတော့ဟုတ်ပါပြီ ...တန်းစီလှည့်တန်းပြီးဆိုတော့ ကွမ်းတောင်ပန်းထောင်တွေကိုင်ရမှာလား ... ရွှေရုပ်တို့က အဲ့ဒါဘဲလုပ်ဖူးတာ ... ´´ ``ဘယ်ကသာ ခြံပြန်ရအောင်လုပ်ပေးပါ ... နှစ်ပေလောက်ပြန်လိုချင်တယ် .... ငါ့မြေငါ့ဟာ အဲ့လိုဆိုင်းဘုတ်တွေကိုင်ပြီး လှည့်ရမှာလေ ...´´ ရွှေရုပ် ရယ်လိုက်သည် ။ ရှက်စရာကြီး .... ထိုအချိန်တွင် အိပ်ခန်းထဲမှ အဖေ့ရဲ့ ချောင်းဆိုးသံထွက်လာသည်။ ထို့နောက် ``ရွှေရုပ် ... ´´ ``ရှင့် ...´´ ``ဧည့်သည်ကို ရေတိုက်လိုက် ...မောနေတယ် ... ပြီးရင် အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက် .... နောက်ပြီး ပြချင်ရင် ငါ့ဆီလာခိုင်းလိုက် အဲ့လမ်းဖောက်ဖို့ပြောတာ ငါပြောတာ ... ´´ ``ဟုတ် ...အဖေ့ကို ဘာပြရမှာလဲ ဟင်....´´ အဖေကတစ်ခွန်းတည်းပြောသည် ``ဆန္ဒ..´´ ----------------------- ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ ...ခုဆို ရွှေရုပ်တို့ရွာလည်လမ်းကြီးသည်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီ ။ သာရေးနာရေး ဘာရေးညာရေး ထိုလမ်းမှပင် သွားလို့ရပြီဖြစ်သည် ။အရင်တုန်းက ရေမြောင်းဖြစ်နေသောလမ်းမှာ အခုအခါ ညနေတိုင်းကလေးတွေဆော့ကစားရာနေရာဖြစ်ခဲ့ပြီ ။ အခုတော့ အားလုံးနားလည်လောက်ပါပြီ။ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ရွှေရုပ်
Posted on 5/13/2013 by shweyoat
ကျမတို့ရပ်ကွက်မှာ အပ်ဒိတ်ကျကျ မဟာဆန်သူအကြောင်းကို အော်ဟစ်ပြောဆိုနေကြတယ်။ ``မုန်တိုင်းလာရင် စားစရာပြတ်မှာ ဆန်တွေဆီတွေဝယ်ရအောင်´´
``ဟဲ့ .... လကုန်ပြီးဘယ်နှစ်ရက်ရှိလို့ ဆန်တွေဆီတွေဝယ်မှာလဲ ...´´
``အင်...... ခုမှ ဆယ်ဲရက်ကျော်ဘဲ ရှိသေးတယ်....´´
``ဘာ ဆယ်ရက်ကျော်ဘဲရှိတာလဲ ဆယ်ရက်ကျော်ကြီးများတောင် ရှိသွားပြီ... အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲ ပိုက်ဆံ ....ဘယ်သောက်ဆံနဲ့ ဘာတွေဝယ်ခိုင်းနေတာလဲ...´´
``ဒါဆိုလဲ ချေးငှားပြီးဝယ်လေ ... နောက် မုန်တိုင်းဝင်မှ ယောင်္ကျားလုပ်နေပြီး အမျှော်အမြင်မရှိဘူးမလုပ်နဲ့...´´
ဘေးအိမ်မှလွှင့်ပျံလာသောစကားများကြောင့် ရွှေရုပ် သဘောကျစွာပြုံးမိပါတယ်.....ဒါဘဲမဟုတ်ပါဘူး...
``ဟေ့ ဘာတွေပြောနေတာတုန်း .... မုန်တိုင်းဝင်ရင် ကြက်သားဈေးတွေကျတယ်အကောင်လိုက်တောင် တစ်ထောင်ထဲနဲ့ရတယ်.... ´´
အရှေ့အိမ်ကနေ ကျမတို့ခြေရင်းအိမ်ကို လှမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ
`` ဟာ ခင်ဗျားတို့က ဘယ်လိုလဲဗျ သူများတစ်ကာတွေ မုန်တိုင်းဝင်မှာစိုးရိမ်လို့ ကြောက်နေတာ ခင်ဗျားက ကြက်သားစားချင်နေတာလား.. ခင်ဗျားဘယ်လိုလူလဲ ....ဦးနှောက်မရှိဘူးလား...´´
အဲ့မှာဘဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်နှစ်အိမ် မုန်တိုင်းစ၀င်ပါတော့တယ် ။ တကယ့်လာမယ့် မဟာဆန်က ဘယ်နေမှန်းမသိပါဘူး ..... သူတို့မုန်တိုင်းကတော့ ရွှေရုပ် ပြတင်းပေါက်ကနေ အသာချောင်းလို့ရအောင်ကို ထန်ပါတော့တယ်။
``ဦးနှောက်ရှိလို့ လူစကားပြောတာပေါ့ မဟုတ်ရင် ငါက နင့်လိုဟောင်နေမှာပေါ့... ဟိုတစ်ခါနာဂစ်တုန်းက နင်တို့ဘဲ ကြက်သေကောင်တွေ ငုံးသေကောင်တွေသွားဝယ်ပြီးကြော်စားတာ တဖြဲနှစ်ဖြဲနဲ့ ဘာခုမှ မုန်တိုင်းကိုကြောက်တာလဲ ....´´
အိမ်ရှေ့အိမ်က အဒေါ်ကြီးပြောလဲပြော ထမီကို တိုတိုဝတ်လိုက်သေးတယ်.။ ထို့နောက် ၀ုန်းကနဲ အိမ်ပေါ်ကခုန်ချပြီး အင်္ကျီလက်ကိုပင့်တင်လိုက်တယ် ... ရွှေရုပ်မှာလဲ ချောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ရင်တွေတောင်တုန်လာတယ်လ .... ခြေရင်းအိမ်ကလဲ ဗလသာမရှိတာ ဇတော့ရှိတယ် .... သူလဲ အိမ်ရှေ့ကို ပုဆိုးတိုတိုပြင်ဝတ်ရင်းထွက်လိုက်တယ်....ရွှေရုပ်လဲ ချောင်းကြည့်တဲ့နေရာကနေမမြင်ရတော အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးရဲ့ လိုက်ကာကိုအကာအကွယ်ယူကာ မဟာဆန်မုန်တိုင်းကို ဆက်လက်ချောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်......
``ဘာပြောတယ် .... ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ဟောင်တယ်လေးဘာလေးနဲ့ ခင်ဗျားက ဘာသောက်ဆင့်ရှိလို့လဲ ..... လူကြီးလူကြီးလိုမနေဘူး ... ခင်ဗျား နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာဆိုတာ လက်သုတ်လုပ်ပြီး အထုပ်ထုတ်ရတာဟာလောက်ဘဲသိနေတာ အဲ့ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ် ...ခင်ဗျားမှာ အိုင်ကျူနောလစ်မရှိဘူးလို့ .... ´´
တစ်ဖက်ခြံက အန်တီကြီးကြောင်သွားသည်။ သူအဲ့လို အင်္ဂလိပ်လိုမှုတ်တာကို တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် မကြုံဘူး... ဒါပေမယ့် မသိဘူးပြောလဲ သူများအထင်သေးရာရောက်မယ် ဒါကြောင့်နားစွန်နားဖျားကြားတာနဲ့ ရမ်းသမ်းပြောလိုက်ရတယ်....´´
``ဘာ အိုင်ထဲကျူရိုးတွေနားမှာ ချက်စနောရစ် ဗီဒီယို ငါကောင်းကောင်းကြည့်ဖူးပါတယ် ... ငါ့နောက်မှထမင်းစားလာပြီး လူတတ်ကြီးလာမလုပ်ပါနဲ့...´´
ခြေရင်းအိမ်ကလူပထမ အန်တီကြီးဘာပြောလိုက်မှန်းမသိလို့ အတော်လေးစဉ်းစားယူလိုက်ရတယ် ... ပြီးတော့မှ ဗိုလ်အောင်ဒင်ရယ်သလိုရယ်လိုက်ပြီး
``ခင်ဗျားကို အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဗျ ... ဘယ်နှယ့်ချက်စနောရစ်ကိုပြောနေတာလဲ ... ခင်ဗျားကို ဦးနှောက်အသိဥာဏ်မရှိဘူးပြောတာ.... ဟားဟားဟားဟား....´´
တစ်ဖက်က အန်တီကြီး မျက်နှာကြီး သုန်မုန်သွားတော့သည်။ ထို့နောက် အရှက်ပြေ
``အပိုတွေ နင့်အမေမွေးတုန်းက ငါဆွဲထုတ်ပေးထားလို့ နင်လူဖြစ်နေတာ ငါ့များပြန်ခွပ်ချင်သေးတယ်...´´
ခြေရင်းအိမ်ကလူ ငြိမ်သွားပြန်တယ် .... ဒီတစ်ခါတော့ သူအဲ့အန်တီကြီးကိုမနိုင်နိုင်တော့ ... အဲ့အန်တီကြီးကိုသူ့အမေဗိုက်ထဲက သူဆွဲထုတ်လို့လဲမရတော့ ....ထိုအန်တီကြီးမျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်။ အန်တီကြီးကလဲ `နင်ဘာပြောမလဲ .....ငှဲငှဲ ´ ဆိုသော အကြည့်နှင့်မိန့်မိန့်ကြီးပြန်ကြည့်နေလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့်...
``ခင်ဗျား.... ခင်ဗျားနော် ..... ကျုပ်က လူကြီးမို့ကြည့်နေတာ.... ကိုယ်လင်ကိုယ်မယားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတာကိုခင်ဗျားက ကြားက၀င်ပြီး အာချောင်တာလေ...´´
``အောင်မယ် .... နင်တို့ကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောသာပြောနေတာ နင်တို့တိုးတိုးကို တစ်ရပ်ကွက်လုံးကြားတယ် ....´´
ထိုအခါ ထိုလူရဲ့မိန်းမက ရှက်လို့ထင်တယ် သူ့ယောင်္ကျားကို အိမ်ထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတော့သည်။ ထိုအချိန်မှာဘဲ မဟာဆန်မုန်တိုင်းက ပြီးဆုံးသွားတော့သည်။ ဒါပေမယ့်
``ဒုန်းး...... ဒိုင်း...... ဒုန်း...ဒိုင်း ....ဒုန်းဒုန်း ဒိုင်းဒိုင်း.......´´
ရွှေရုပ်လန့်နိုးလာသည်။ မုန်တိုင်းများဝင်ပြီလားလို့ပေါ့ .။ ထို့နောက်အသံကိုဆက်လက်နားစွင့်တော့ အိမ်နောက်ဘေးအိမ်ကမှန်းသိလိုက်သည် ။အချိန်ကိုကြည့်တော့ ဆယ့်နှစ်နာရီခွဲ ။ မှန်ပေါက်ကနေ ခန်းစီးကိုအသာလှပ်ကြည့်တော့ ထိုအိမ်က လူကြီး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီး သွပ်တွေ တူနဲ့လိုက်ထုနေခြင်းပါ။ အော်....... မဟာဆန်....မဟာဆန် ...... အကျိုးပေးပုံများနော်.... အိပ်တောင်မရပါဘူး အဲ့နေ့ညကလေ..........
(သြော်.... ရွှေရုပ်ရခိုင်ပြည်မှာနေတာလားတဲ့ မဟုတ်ဘူး ရွှေရုပ်တို့ အပ်ဒိတ်ရပ်ကွက်က မှော်ဘီမှာရှင့်...) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Posted on 4/21/2013 by shweyoat
ရွှေရုပ်ဘေးမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှ အပ်ဒိတ်ဖြစ်သူမမများ အန်တီများ ၀ိုင်းနေပါသည်။ လူက မနေ့က့ အင်း... ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ပြန်ပြောရင် ပေါင်လှန်ထောင်းရာကျမလားမသိဘူး ...လှန်တော့မထောင်းချင်ပါဘူး ...မလှန်ဘဲထောင်းဆိုတော်သေး .... မနေ့က ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ နေပူကြီးစီးပြီးသကာလ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အပင်လေးတွေညှိုးနေတယ်ဆိုပြီး ရေပိုက်ဖွင့် ... သီချင်းတညည်းညည်းဆို အပင်တွေရေလောင်းလိုက်တာ ...ဟော ... ခုကျတော့ နှာစေးပြီးချောင်းဆိုး ဖြစ်တော့သည်။ ဆိုင်မသွားချင်တာနဲ့ ကိုယ့်ဘေးမှာ အပ်ဒိတ်ရပ်ကွက်မှ လူတတ်ကြီးများက စေတနာပလပွနဲ့ ဝေဒနာတွေ အကုန်ကြွအောင် ပြောနေကြခြင်းပင်။
``အအေးပတ်သွားတာနေမှာ မနေ့က ရေလောင်းတာတွေ့လိုက်တယ်...´´
နဲ့ငြင်းနေကြသေးတယ် ။အဲ့အချိန်မှာဘဲ အဖေပြန်လာတော့ ဘေးအိမ်က ဆရာမအပျိုကြီးကို
``ကဲ ညည်းညီမကို ညည်းဘဲ ဆေးခန်းလိုက်ပို့လိုက် ဆေးထိုးပေးလိုက် .... ´´
``ညီမလေးမှောက်လိုက်မကြည့်နဲ့  တင်းမထားနဲ့ ....´´
ဆရာမသည် ဆေးထိုးသည့်နေရာကို လက်ဖမိုးနဲ့ချေသည်။ ရွှေရုပ်မျက်ရည်မကျအောင်ထိန်းထားရင် ထမည်အပြုတွင်
``မီး ကြာဇံကြော်စားမယ် .....၀ယ်ခဲ့....´´
ပြောလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် အဖေသည် ရွှေရုပ်မကြားအောင် သူ့ဘာသာတစ်ကိုယ်တည်း ...
``ဖျားနေလို့သာပါဘဲ.... စားပေါ့...မနက်ဖြန်မှ မသက်သာရင် ဆေးထပ်ထိုးခိုင်းဦးမယ်....´´
Posted on 3/14/2013 by shweyoat
ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာဘုရင်ဧကရာဇ်မင်းမြတ် ချီးမြှင့်တော်မှုသော စာပေါဂုရုဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ၊ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဘုရင်ခံမင်းမြတ်ချီးမြှင့်တော်မှုသော အုန်းမုတ်ခွက်(ရေအိမ်တက်ရန်)နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်ရ
ဇယတုဇယသဗ္ဗမင်္ဂလံ ။ ။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ နှောင်တန်ခူးလဆန်း(၄)ရက်၊ ၃၀၁၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁၅)ရက်၊တနင်္လာနေ့သည် မဟာသင်္ကြန်အကြတ်ရက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ခုနှစ်၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၆)ရက်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၁၆)ရက်၊အင်္ဂါနေ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော် အစိုးရ စံချိန်တော်နံနက်စက်(၈)နာရီ (၁၀)မိနစ်၊(၄၄)စက္ကန့်အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန်တက်၍၊၁၃၇၅ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း(၇)ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလ(၁၇)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် မဟာဘုတ်တွက်ကိန်းအရ တနင်္လာဂြိုလ်သည် အထွန်းအိမ်တွင်ရှိသောကြောင့် တနင်္လာနံ ထွန်း၍ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်သည် ပုတိအိမ်တွင်ရှိသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံပုပ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် အင်္ဂါနေ့တွင်အတာတက်သောကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးများအတာစားသည်။
မှတ်ချက်- ဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေရုပ်သည် ဤအထိမဟာသင်္ကြန်စာအား တစ်ရွက်သုံးရာဝယ်ကာ ယူ၍ ကူးချထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အောက်ဘက်တွင် ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အကောင်းစားရန်ကို အဲကောင်းစားရန်ကို ရည်သန်ကာ စေတနာရှေ့ထား၍ ဖြီးဖြန်း ပြောဟောထားသည်များကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါရန်…..
တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင်း ပြောပါများပါးစပ်ညောင်း၍ သွားပါများခြေထောက် ညောင်းနေလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်တွင် အိပ်ယာပေါ်တွင်အိပ်ပြကာ မော်ဒယ်လုပ်ရခြင်း၊ အိမ်သာကြွေခွက်တွင် အီးအီးညှစ်ကာ သရုပ်ပြရသည့် အလုပ်များတွင် ၀င်ငွေကောင်းနေ လိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် မိန်းကလေးများ အိမ်သာဝင်ခါနီ်းချိန်တွင် ရည်းစားစကားပြောခံရကိန်း ကြုံသောကြောင့် အောင့်ထားရလိမ့်မည်။ ယောင်္ကျားလေးများသည်လည်း အင်းအင်း ပါချိန်တွင် အဖြေရကိန်းကြုံမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် အူအတက်ပေါက်ကိန်းမြင်သည်။ အကယ်၍ အူအတက်မပေါက်ခဲ့သော် အောက်အတက်ပူလိမ့်မည်။
ယတြာ- အညံ့များပျောက်စေရန် အုန်းပင်ကို လက်သီးနှင့် ခပ်နာနာထိုးပြီး အောင်ပြီ ဟုသုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုရန်။ အောင်ပြီလားတော့မသိပါ.. အုန်းသီးကြွေကျလို့ ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲအားကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ရကိန်းရှိမည်။
တနင်္လာသားသမီးများသည် ယခုနှစ်အတွင်းလမ်းလျှောက်လျှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြေးလျှင်ဖြစ်ဖြစ် ခြေထောက်ကိုသာ
အားထားနေရလိမ့်မည်။အလုပ်အကိုင်တွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ခရီးတွင်အောင်မြင်မည်။ ဥပမာ- ခရီးဝေးကို ကုန်းကြောင်းလျှောက်ရသောလုပ်ငန်းများ လမ်းကိုကုန်းကုန်းကွကွလျှောက်ရသောလုပ်ငန်း ။ အချစ်ရေးတွင် ခွေးကိုက်ခံရသော ဒဏ်ရာအား ကောင်မလေးမှဂရုဏာသက်သောကြောင့် ချစ်သူရကိန်းမြင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခွေးကိုက်ခံထိအောင်နေပါ။ ကျမ်းမာရေးတွင် ချူချာမည် ။အကယ်လို့ မချူချာခဲ့လျှင် ကျမ်းမာရေးကောင်းနေမည်။ ပညာရေးတွင် ခိုးချမှစာမေးပွဲအောင်မည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်မှာ မိုက်ခရိုလေးတွေသေချာပြင်ဆင်ထားရန်။
အဆိုးများပျောက်စေရန် ကုတ်ကိုင်းကိုသွားကာ ကုက္ကိုလ်ကိုင်းကိုခို၍ ကွိကွိကွကွပြောပါ ။
အင်္ဂါသားသမီးများသည်ယခုနှစ်တွင် စကားပြောတိုင်းအသံများထွက်နေလိမ့်မည်။အိမ်တွင်မွေးထားသော တိရစ္ဆာန်များရှိက ဇီးရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းနိုင်သည့် ကြက်ဝက်ဘဲဆိတ် မွေးထားရန်ဖြစ်သည်။ ရှောင်ရန် -သမီးမွေးထားခြင်းမှရှောင်ကြင်ရန်။ ယခုနှစ်အတွင်း အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် င်္ဇီးပေါင်းထုတ်ရောင်းခြင်း၊ ဇီးသီးထုတ်ခြင်း သူများအပေါ်တွင်ဆရာလုပ်ခြင်း၊ ညာစားခြင်းအလုပ်များ ၊ တွင် ၀င်ငွေကောင်းနေလိမ့် မည်။ အချစ်ရေးတွင်ဆရာမများကိုမကြိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကြိုက်မိပါက ဆရာမ လုပ်ခြင်း ခံရကိန်းရှိသည်။ ပညာရေးတွင်မှု စာကျက်လေအိပ်ချင်လေဖြစ်သော ကြောင့် အိပ်ချင်လာသောအခါ စာကျက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် ဆံပင်ထဲတွင် သွေးမတိုးခြင်း ၊ဆီးသွားသောအခါ အရည်များသွားခြင်း ၊ အိပ်သောအခါ မျက်လုံးမှိတ်မိခြင်းများဖြစ်နေ လိမ့်မည်။အဆိုးများပျောက်စေရန် အိမ်ရှေ့တွင်ဇီးပင်ရှိလျှင်ခုတ်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မရှိလိုက်စိုက်ပါ။
ရာဟု/ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့် စိတ်ဓါတ်မကျစေရန် စိတ်ဓါတ်အား ငါးကိုးအိတ်နှင့်ထုတ်ကာ အုန်းပင်ပေါ်တင်ထားရမည်။ အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ခြင်း (ရုပ်ရှင်ရိုက်လျှင်သတိထားပါ … ရှင်နေသောကြောင့် ကိုယ်ပြန်အရိုက်ခံရကိန်းကြုံမည်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်သေရိုက်ပါလေ… ၊ ကားရိုက်လျှင်လည်း သတိထားပါ။ ကားပိုင်ရှင်မတွေ့ခင်ရိုက်ပါလေ။ မဟုတ်လျှင် ပြန်အရိုက်ခံရလေမည်။ အချစ်ရေးတွင် ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေသူအားကြိုက်မိရင်း ကိုယ်ပါသွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွားနိုင်သည်။ ပညာရေးအတွက် ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်ဖြစ်တတ်သည်။ အရာထင်အောင် ဘောပင်မှန်ကောင်းကောင်းဖြင့်ရေးပါလေ။ ကျမ်းမာရေးဘက်တွင် အိပ်ဆေးနှင့် ၀မ်းနှုတ်ဆေးတွဲစားမိသောကြောင့် အိပ်နေရင်းဝမ်းသွားနိုင်သည်။
ယတြာ-အညံ့များပျောက်စေရန် လပြည့်ညတွင် လမင်းကြီးကိုမော့ကြည့်ရင်း လေးဖြူ၏ ကိုယ့်ရဲ့ငွေလမင်းသီချင်းကို အကျယ်ကြီး အော်ဆိုပါရန်။ (ခဲပေါက်ခံရမည်)
ကြာသာပတေးသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ဆင်ဖမ်းမည် ကျားဖမ်းမည်ဟု ကြွေးကြော်ရကိန်းရှိသည် ။ သို့သော်လက်တွေ့တွင် ယင်ကောင်တောင်မဖမ်းနိုင်သည့်အပြင် ပျားတုတ်ခြင်းကို ခံရနိုင်သည်။ စီးပွားရေးတွင် ဖ၀တ်ထုတ်နှင့်စသော လုပ်ငန်းများအကျိုးပေးမည်။ ဥပမာ ဖျာရောင်းခြင်း ၊ ဖြုတ်၊ မွှား၊သန်း လက်လီလက်ကား ဖြန့်ချီခြင်း စသည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ကြုံရမည်။ ထို့ကြောင့် ၀မ်းကို ကြိုးမချည်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် ဖ၀ထုတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်သော သူများနှင့်ဖူးစာဆုံနိုင်သည်။ ဥပမာ - ဖုန်းဟန်းဆက်ရောင်းသူများ- ဖိုင်တွဲရောင်းသူများ ပညာရေးတွင်ဘက်တွင် ကြိုးစားပါသော်လည်း စာမေးပွဲတွင် စာမတိုးသောကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခိုးချပါလေ။
ယတြာ - အညံ့များပြေပျောက်စေရန် ဖာတစ်လုံးခေါင်းရွက်ကာ လမ်းတကာလှည့်ပြီး ဖားလို“အုံးအမ် အုံးအမ်” အော်ပါ ။
သောကြာသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ရယ်လျှင်ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ ထမင်းစားပြီးလျှင် အိပ်ချင်စိတ်များနေလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သန်းတုတ်ကုမ္ပဏီဖွင့်လျှင် လုပ်ရသောအလုပ်များအောင်မြင်မည်။ အဓိကအားဖြင့် ခေါင်းသန်းရှိသော အိမ်ထောင်သည်များ ဖောက်သည်ဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးတွင် သောကြာသမီးများသည် အောက်….အင်း အောက်ပြည်အောက်သားတွေနဲ့ ဖူးစာဆုံနိုင်သည်။ သောကြာသားများသည်လည်း အောက်…(ဟင်…အောက်ကကိုမလွတ်နိုင်ဘူး) သူတို့လဲ အောက်ပြည်အောက်သမီးများနှင့်ဖူးစာဆုံနိုင်သည်။ ပညာရေးတွင် ကျက်သောစာများရကာ မကျက်သောစာများမရဖြစ်နေလိမ့်မည်။
ယတြာ- စာဥသီချင်းဆို၍ သစ်ပင်တက်ကာ စာကလေးများအား စာမကြီးလိုအစာ ကျွေးပါလေ။
စနေသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ကြည့်လျှင်မြင်နေရမည်။ မကြည့်လျှင်မမြင်ရသော နှစ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးတွင် ထန်းပင်တက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးပေးမည်(ပြုတ်ကျသောကြောင့်) ။ အချစ်ရေးတွင် တုတ်တိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်သော ချစ်သူရကာ လူကြားထဲတွင် အရှက်ရနိုင်သည်။ ပညာရေးတွင် ကကြီးကနေ အအထိကို မရသောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရကိန်းမြင်သည်။ ရပ်ဝေးမှ စာများလာမည်။ စာများအပြင်
ကျီ်းများခိုများလာမည်။ ကျမ်းမာရေးတွင် လေလည်ချင်သောကြောင့် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသောနေရာကိုသွားကာ လေလည်မိသဖြင့် လေဖြတ်နိုင်သည်။
ယတြာ- ခါးတောင်းကိုမြှိင်နေအောင်ကျိုက်ကာ ပေတရာလမ်းတွင် ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းလျောက် ၍ ဟိုးအရင်က သီချင်းဖြစ်သော “ပေတရာကို လျှောက်ပါလို့မြင်သလောက်ပြလိုက်ချင် ” အစရှိသောသီချင်းကိုအော်ဆိုပါရန်။
ဤတွင်နိတ္ထိတံ ၊ပတ္ထိတံ တုံချန် ကလုံကလွမ်၏။
Posted on 2/21/2013 by shweyoat
“ ရွှေရုပ်ရေ … ”
ရွှေရုပ်ကြည့်လိုက်တော့ အမကြီး ခင်စန္ဒာ၊
“ဟယ်…လာလာ မမ… ဘယ်ကလှည့်လာတာတုန်း..”
“ဘယ်ကမှလာတာမဟုတ်ဘူး ဟိုလေ… နင့်ဆီမှာထိုးလို့ရလား …”
ရွှေရုပ် အလန့်တကြားအော်လိုက်မိသည်။ ဒါကို အမကြီး ခင်စန္ဒာက သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးထဲက စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုတုတ်ပြသည်။ ကြည့်လိုက်မိတော“့ အင်္ဂါဟူးသား ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နှင့် ဂဏန်းနှစ်လုံး
“အဟီး… ငါတို့ဆီမှာ အဲ့ဟာထိုးလို့မရတော့ဘူး ပိတ်သွားလို့ ... အဲ့ဒါ နင်တို့ဆီမှာရနိုင်မလားလို့ ငါကြားထားတာ နင်တို့ရပ်ကွက်က မရတာမရှိဘူးတဲ့…”
ရွှေရုပ် ရှုံ့မဲ့သွားသည်။ ဒါနဲ့ အဲ့ဂဏန်းနှစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုးခြောက်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသည်။
“အဲ့ကိုးခြောက်ကို ထိုးမှာလား … ”
“ဘယ်က ကိုးခြောက်ကိုထိုးရမှာလဲ …ခြောက်ကိုးဟဲ့.. ဆရာက အရမ်းတော်တာ သူက အတိတ်တွေဘာတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးနော် …ပေးလိုက်ရင်တည့်ဘဲ … ထိုးလိုက်ရင်လဲ တည့်လွဲ …အဲလေ တည့်ဘဲ… လုပ်စမ်းပါအေ … နှစ်သောင်းဖိုးလောက် …”
“ဟင် …. ”
ရွှေရုပ်လန့်သွားသည်။ ဟုတ်သည်လေ။ နှစ်သောင်းဆိုတာနည်းတဲ့ပမာဏလား မြို့ထဲသွားရင် ဗိုက်ကားအောင် စားလို့ရသေးတယ်။ သူ့ကြည့်တော့အဟုတ်ရှင်။ အဲ့ဒါနဲ့ဘဲ ဘေးက နှစ်လုံးမမကို ပြေးတွေ့ရတယ် ။ ရွှေရုပ်မှာ အဖမ်းမခံရဖူးသောသူခိုးလို အထက်ပါ အမကြီးအား နှစ်လုံးထီထိုးပေးရမည့် ကိစ္စကိုအတော်လေး စွန့်စားစကားပြောရတော့သည်။
သြော် ရပ်ကွက်ထဲက အက်ဒိတ်ကျကျ နှစ်လုံးမမအကြောင်းလဲပြောပြရဦးမယ်။ သူမက နှစ်လုံးကို အလွန့်အလွန်မြတ်နိုးခုံမင်သူဖြစ်ပြီး မနက်ရောညရော နှစ်လုံးထိုးသူဖြစ်သည်။သို့သော် သူမ၏ ယောင်္ကျားက ရွှေရုပ်တို့ update ရပ်ကွက်ထဲတွင်ဂါလီ(ဘေးတွဲပါသောပစ္စည်းတင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်
ထားသော စက်ဘီး) နင်းသူဖြစ်သောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ နေညို မညို လေပြိုချင်သောသူ ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့်သူမတွင် ပိုက်ဆံ အတော်များများမရှိချေ။ ထို့ကြောင့် သူမထိုးသောနှစ်လုံးထီမှာ အစိတ်ဖိုးအာ ၊ငါးဆယ်ဖိုးအာ( အာဆိုတာ ဂဏန်းနှစ်လုံးကို ပတ်လည်ရိုက်ထိုးတာဖြစ်ကြောင်း နှစ်လုံးထီနှင့်နီးစပ်သော အပေါင်းသင်းများသိကုန်၏) ထိုးလေသည်။ သို့သော် သူမသည်အခြားအခြား အက်ဒိတ်ရပ်ကွက်ထဲက မအားသော အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးကြီးများကိုယ်စား နှစ်လုံးထိုးပေးခြင်း ၊ သူမထိုးပေးသော သူများမှ နှစ်လုံးပေါက်လျှင် မုန့်ဖိုးရခြင်းများရှိသည်။ နှစ်လုံးထီနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် နှစ်လုံးမမနှင့်တွေ့လိုက်ပါ ။ ချက်ချင်းပေါက် မပေါက်လျှင် ဂေါက်မည်။ ထိုသို့ နာမည်နှင့် နေသောသူလဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် …ရွှေရုပ် မလုပ်ခဲ့ဖူးသော နှစ်လုံးစကားများနှင့်ထိတွေ့ရတော့သည်။
“အဲ့ဂဏန်းလေး ထိုးပေးပါ … နှစ်သောင်းဖိုးတဲ့ ”
“တဲ့ဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက်က ထိုးခိုင်းတာပေါ့ ဟုတ်လား…..”
နှစ်လုံးမမစကားကြောင့် နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိသည်။ အပေါက်မှာ မျက်နှာလေးသာဖော်ထားသော နှစ်လုံးထိုးခိုင်းသူအမကြီးက သူ့ကိုယ်သူလက်ညှိုးထိုးကာ လက်ခါပြပြီး ရွှေရုပ်ကို လက်ညှိုးထိုးကာ ခေါင်းညိမ့်ပြလေသည်။ထို့ကြောင့်
“တဲ့ ဆိုတာ တည့်ဘဲ ထိုးမယ်။ ပတ်လည်မရိုက်ဘူး … ပြောတာ အဟီး… ”
သူမသည် တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသလို ရွှေရုပ်ကို တစ်ဖက်ခြံထဲမှနေ ကြည့်ရင်း
“ဒါ….ဒါဆို ဒါ မရွှေရုပ်ထိုးတာလား…”
သူမသည် ရွှေရုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးကာ မေးသောကြောင့် ရွှေရုပ်က လက်ညှိုးကို ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပြန်ထိုးကာ
“ရွှေရုပ်လား… မဟုတ်…..ဟင်…. ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် … ရွှေရုပ်ထိုးတာ နှစ်သောင်းဖိုးလုံးထိုးတာ…..အဟီး”
မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမလို့ဟာ နောက်ကွယ်က အမကြီးက ခေါင်းငြိမ့်ပြလေတော့ ဟုတ်တယ် ဖြစ်သွားသောအခါ နှစ်လုံးမမက မျက်စိအရောင်တွေ ပန်းထွက်သွားသည်။
“ဟယ်………… တစ်ခါမှ နှစ်လုံးမထိုးဖူးတဲ့သူက တည့်ဆော်နေပါလား…”
သူမ၏ အပြောကြောင့် ရွှေရုပ်ရှက်သွားသော်လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ရလေတော့သည် ။ပြောတဲ့ပုံကလဲ ဘာတွေမှန်းမသိ။ ထို့နောက် နှစ်လုံးမမ ဖက်ဖုတ် ဖက်ဖုတ်နဲ့ ပြေးသွားလေသည်။ (သူမပြေးတာ တစ်ကယ်ဖက်ဖုတ်တာနော် … ဖိနပ်က နောက်မြီးတစ်ခြမ်းမရှိတော့ဘူး ဘယ်ညာနှစ်ဖက်လုံးအဲ့တော့ ခြေအကျကဖိနပ်ရှိတော့ ဖက်… ပြီးတော့ နောက်က ဖနောက်နဲ့ ကျတော့ ဖုတ် …အောင်မလေးရှင်းပြရတာ လက်ညောင်းလိုက်တာ…
ခဏကြာတော့ ဖက်ဖုတ်ဖက်ဖုတ်နဲ့ဘဲ ပြန်လာပြီး
“ရော့ ကျမလဲ နှစ်ထောင်ဖိုးသူများဆီက ချေးထိုးလာခဲ့တယ်…”
“ဟင်… ဟုတ်…ဟုတ်ပါပြီ … ဒါပေမယ့် အဲ့ဂဏန်းကို ရွှေရုပ်ထိုးတာ သူများတွေသွားမပြောနဲ့နော် … ခင်တဲ့သူဘဲ ပြောရတာ …. ဆရာအင်္ဂါဟူးသားက မကြိုက်ဘူးသိလား…”
“အို …. အဲ့တာတော့ စိတ်ချ ဘယ်သူ့မှမပြောဘူး…. ကျမကို မယုံဘူးလား …. ”
“ယုံ… ယုံတာပေါ့… ”
ခုနကလို ဖက်ဖုတ် ဖက်ဖုတ်နဲ့ပြန်ပြေးထွက်သွားလေတော့သည်။ ထို့နောက်ရွှေရုပ်လဲ နှစ်လုံးလာထိုးတဲ့အမကြီးကို ဘောင်ချာပေးကာပြန်လွှတ်လိုက်ရတော့သည်။ဒါတောင်မှာလိုက်ရသေးသည်။ နောက်တစ်ခါ ရွှေရုပ်တို့ရပ်ကွက်မလာပါနဲ့လို့ ။ အခြားရပ်ကွက်မှာလဲ နှစ်လုံးရောင်းပါတယ်လို့ပေါ့။ ထို့နောက် ရွှေရုပ်ရဲ့ ကုန်မစုံတစ်စုံဆိုင်လေးကို ပြန်ထိုင်ရတယ် ။ အဲ့အချိန်မှာဘဲ အိမ်ဘေးက နှစ်လုံးမမက သူ့မ ခြံဝတွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ ရွာလည်လမ်းက လာသမျှသူတွေကို လက်ဆွဲပြီး အသံတိုးတိုး (လုပ်ပြီးပြောလဲ ကြားရတာဘဲလေ) ဖြင့်
“အဲ့ဟာ ဟိုဘက်အိမ်ကအမထိုးတာလေ …သူက တစ်ခါမှ မထိုးဖူးဘူး … ဒါပေမယ့်နော် နှစ်သောင်းဖိုးတောင်ထိုးတာ …. ရေလည်ဆော်တာ ဆရာ အဲ့ဟာဘယ်သူ့မှမပြောရဘူးတဲ့ အမကို ကျမက အချင်းချင်းမို့ပြောတာ … ထိုးရင်ထိုးထားလိုက် … သူက နှစ်သောင်းဖိုးတောင်ထိုးတာ … ဒါဘဲနော် ဘယ်သူ့မှမပြောရဘူး ….”
ထိုအမကြီးသည် ခေါင်းကိုညိမ့်ကာ ညိမ့်ကာ ပြုံးရွှင်ပြီး ပြန်ထွက်သွားလေသည်။ ထို့နောက် ရွှေရုပ်တစ်အံ့တသြဖြင့် ထွက်သွားသောအမကြီးကို ဆိုင်ပြင်ထွက်ပြီး ကြည့်တော့ ထိုအမကြီးကလဲ လမ်းမှာတွေ့သော လူတစ်ယောက်အား ရွှေရုပ်ဆိုင်ဘက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြကာ လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းထောင်ပြလေတော့သည်။ သွားပြီ ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းတွေ အလွန်အလွန့်ကို ပျံ့နှံ့တာ မြန်လေစွ။အင်တာနက်တောင် ရွှေရုပ်တို့ အက်ဒိတ်ရပ်ကွက်လောက် မြန်မည်မထင် ။ နှလုံးမမသည်လည်းခြံပေါက်ဝ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ တွေ့သမျှ လူကို ခင်လို့ချည်းပြောနေတော့သည်။ သို့နှင့် နှစ်လုံးထွက်မည့်အချိန် ညနေသို့ရောက်လာလေတော့သည်။ ရွှေရုပ်သည်လည်း ထိုဂဏန်းအားထွက်စေချင်တော့သည်။ မဟုတ်လျှင် အက်ဒိတ်ရပ်ကွက်မှ ဝေဖန်ချက်များ ရွှေရုပ်အတွက်ဖြစ်ကုန်တော့မည်။
“ကုန်ပြီ…. ဟင် ရေထဲချတာမှ ပလုံဆိုတာအသံမြည်ဦးမယ်.. ခုတော့ ဘိုးတော်ပေးတဲ့ဂဏန်းကို ဖွားတော်က မလိုက်တာ ကုန်ရော…. ဘာ အင်္ဂါဟူးလဲ ….ဘယ်က အင်္ဂါဟူးလဲ … ဒီရပ်ကွက်လာကြည့် ဖင်ပါပူးသွားမယ်…. တောက်….”
ထိုသို့ လျှင် “ တောက် …. တဲ့ …. ကျွတ်…. ကျွဲ့”အာမေဋိတ်ပေါင်းစုံ ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးဆူညံနေချိန်မှာတော့ ရွှေရုပ်ရဲ့ ဆိုင်လေးကိုပိတ်ကာ အိမ်ထဲမှာ ကာရာအိုကေ ကို ဘော်လူး အမြင့်ဆုံးထားပြီးအော်လိုက်တော့သည်။
“လူမွဲတွေမှ မနှေးခတ်မည် ခွေးဖြစ်တော့မည်… ဟေ့ ကျမ်းကျမ်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ချဲထီကိုထိုးမည်….”